Garabka Alliansen oo ka taageero sarreeya garabka casaan cagaarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyeyaasha xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka. sawir: TT/Montage
La daabacay tisdag 5 december 2017 kl 09.59
Xisbiyada ku bahoobey awoodda dalka ee Socialdemokraterna iyo Miljöpartiet ayay taageeradoodu gaarsii-san tahay 36,4%, waana tiro ka hooseeysa taageeradii ay bulshada ka heleen doorashadii ugu dambeeysay ee 2014.
Xisbiyada garabka midig ee Alliansen ayay taageeradoodu gaarsii-san tahay 39,2 procent, sida ku cad saadaalinta tira-koobka hayadda SCB ee saaka la soo ban-dhigey.
Xisbiga Moderaterna oo kor u kacay.
Xisbiga Moderaterna oo ay taageeradiisu aad kor ugu kacday saadaalinta tira-koobka hayadda SCB ee bishii noveembar. Xisbiga M ayay taageerada loo hayaa kor u kacday wixii ka dambeeyay saadaalintii middan ka horreeysay 4,1%, isagoona uu xisbigu nasiib u yeeshay taageero gaarsii-san 22,2%.
Sidoo kale waxay taageeradii loo hayay hoos u dhacday xisbiga Sverigedemokraterna 3,6%. Taageerada xisbiga ee SD ayaa iminka gaarsii-san 14,2%.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa hoos ayay taageeradiisu hoos uga dhacday xadka lagu galo baarlamanka. Xisbiga MP ayaa hantiyay taageero gaarsii-san 3,8%, halka uu xisbiga Socialdemokraterna kor u kacay 1,5%, hantiyayna 32,6%. Xisbiga S ayay iminka taageeradiisu ka sarreeysaa middii uu helay doorashadii 2014-kii.
Xisbiga Centerpartiet wuxuu tira-koobkan ku hantiyay 9,5%, hoos u dhac 1,8%.
Xisbiga Liberalerna ayay sidoo kale taageeradiidu hoos u dhacday 0,8%, inimkana ay taageeradiisu gaarsii-san tahay 4,2%.
Xisbiga Kristdemokraterna ayay taageeradiisu weli ka hooseeysaa saqafka xubin-nimada baarlamanka 3,1%.
Xisbiga Vänsterpartiet ayay taageeradiisu gaarsii-san tahay 7,0%.
Qaybaha saadaalinta SCB.
Saadaalinta tira-koobka hayadda SCB ee maanta la soo ban-dhigay ayaa ka kooban laba qeybood. Qaybta hore oo maanta la baahin doono ayaa ah natiijada taageerada shacabka haddii ay maanta doorasho dhici lahayd iyo qaybta labaad oo la soo ban-dhigi doono gabagabada toddobaadkan oo la xiriirta xisbiyada ay bulshadu taageerada u hayso iyada oo aan loo aaba yeeleyn in la codeeyn doono iyo in kale. Iyada oo qaybtan loo sii kala furfurey da’da, tacliinta iyo xirfadda dadyoowga la wareeystey.
Saadlinta tira-koobka hayadda SCB ee qaybta koowaad ayaa sidoo kale markii ugu horreeysay loo sii kala furfurey deegaan ahaan. Iyadoona lagu saleeyey siddeed